माल्दिभ्स : निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाकाे सुनुवाई ताेकियाे
कोलम्बो- माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनका बारेमा परेको मुद्धामाथि आउदो आइतबार सुनुवाई गर्ने जनाएको छ । हालै भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनबारेमा राष्ट्रपति अब्दुला यमीनले दिएको चुनौतीबारेमा आइतबार सुनुवाई गर्ने तय भएको अदालतले बिहीबार जनाएको हो ।
अदालतले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत् दिएको जानकारी अनुसार आइतबार दिउसो एक बजे सुनुवाई गर्ने निर्णय भएको छ । निर्वाचनको परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउदै राष्ट्रपति यमीनले अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो ।
गत सेप्टेम्बर २३ तारिखका दिन भएको निर्वाचनमा अनपेक्षित रुपमा विपक्षी दलका उम्मेदवार इब्राहिम मोहमद सोलिह विजयी भएको घोषणा गरिएको थियो । उहाँले ५८.४ प्रतिशत भोट पाउनुभएको अधिकारीहरुले बताएका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अहमद सरिफसँगको छलफलपछि अदालतले सुनुवाइको समय तोकेको हो । सरिफले राजधानी मालेमा पत्रकारहरुलाई दिएको जानकारीअनुसार यमीनले अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई रद्ध गरी फेरी निर्वाचन गराउन माग गर्नुभएको छ ।
अमेरिका र युरोपेली संघले पनि यमीनले नस्वीकार्दासम्म निर्वाचनको परिणामलाई अगाडी नबढाउन चेतावनी दिएका छन् । आउदो नोभेम्बरमा कार्यकाल सकिन लागेका ५९ बर्षिय यमीनका समर्थकहरुले पनि निर्वाचनको परिणामलाई चुनौती दिएका छन् ।
पश्चिम बंगालको चुनावी परिणाम : वामपन्थीको भोट दक्षिणपन्थीलाई !
नेपालविरुद्ध बयान दिने कीर्ति आजादलाई हराए पशुपतिनाथले !
२५ वर्षसम्म सिक्किममा सत्ता चलाएका पवन चाम्लिङको पार्टीको हार !
लोकसभा चुनावपछि बने यस्ता कीर्तिमान
जम्मा ५ भोट पाएपछि ग्वाँ ग्वाँ रोए यी उम्मेदवार ! (भिडियो)